Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : ravalisonandriamatoaratsilefilaza
Entry Ravalison: Andriamatoa Ratsilefilaza
Text Rehefa afa-pana i Sahondra, dia nidina hitsidika an-drainy tany Andovosira. Nahazo andro naharitra telo volana indrindra ny mpianatra tamin'izay ka tsy nanana eritreritra hafa Ratremalahy. Gaga ny olona nahita izato hadion'ny hodi-tavan'i Sahondra. Talanjona ny mpiara-mihira taminy raha nahatsikaritra izato fahadongadongany. Nihevingevina toy ny fanjaitra akekezin'ny andriamby ny tovolahy noseraniny. Nisy aza kelikely endaka izay nahavatra nanao "haody" ny tranon-dRatremalahy na dia nataon'ny henatra parapaingo aza ny tongony. Avy hatrany anefa ilehio dia io voatosi-bohon-tanana satria sady kely tena no kely ampombo.